ဘာလီအသင်းကို အနိုင်ရရှိပြီး အဖွင့်ပွဲစဉ်ကို အနိုင်နဲ့ စတင်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် - FOX Sports Asia
ဘာလီအသင်းကို အနိုင်ရရှိပြီး အဖွင့်ပွဲစဉ်ကို အနိုင်နဲ့ စတင်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် အသင်းနဲ့ ဘာလီ ယူနိုက်တက် အသင်းတို့ ကစားခဲ့တဲ့ AFC Cup 2018 အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် အသင်းက ၃ ဂိုး ၁ ဂိုး နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ထိပ်သီးအသင်း တစ်သင်းဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် အသင်း ပွဲကစားချိန် ၁၅ မိနစ်မှာ တောင်ပံကနေ လိုက်တက်လာခဲ့တဲ့ မင်းကျော်ခန့် ဖြတ်တင်ပေးပို့ခဲ့ရာမှာ အီမန်နူရယ် မြေမကျ ပိတ်သွင်းပြီး အသင်းတွက် ဦးဆောင်ဂိုး ရယူပေးခဲ့ပါတယ်။
15′ GOAL! 1-0 @YangonUnitedFC
နောက်ထပ် ၃ မိနစ် အကြာမှာတော့ မောင်မောင်လွင်ရဲ့ ဖြတ်တင်ပေးပို့မှုကနေ ဆယ်လာ အသင်းတွက် ဒုတိယမြောက်ဦးဆောင်ဂိုးကို ခေါင်းတိုက်သွင်းယူပေးခဲ့ ပါတယ်။
18′ GOAL! 2-0 @YangonUnitedFC
Emmanuel makes good on his header this time and doubles Yangon’s lead as they take advantage ofa@BaliUtd defense in shambles.#AFCCup2018 #BLUvYGU pic.twitter.com/g6qfn03WcW
၂၅ မိနစ်မှာတော့ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူး ၂ ဦးရဲ့ အတွဲအဖက်ကနေ နောက်ထပ် ဦးဆောင်ဂိုး ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အီမန်နူရယ်ရဲ့ ပေးပို့မှုကနေ ဆယ်လာ ဂိုးဧရိယာ ထဲမှာအလွယ်တကူ ပိတ်သွင်းပြီး အသင်းတွက် တတိယမြောက် ဦးဆောင်ဂိုး ရယူပေးခဲ့ပါတယ်။
25′ GOAL! 3-0 @YangonUnitedFC
ပထမပိုင်းပြီးဆုံးဖို့ နောက်ဆုံးမိနစ်မှာ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် အသင်း နောက်ခံကစားသမားတွေနဲ့ ဂိုးသမားတို့ရဲ့ ရှင်းထုတ်ပုံအားနည်းချက်ကနေ ဘာလီ အသင်းအခွင့်အရေးရရှိခဲ့ပြီး ဆူကာဒါနာက ၄ ကိုက် အကွာကနေ အနီးကပ် ပိတ်သွင်းယူသွားခဲ့ပါတယ်။
45′ GOAL! 1-3 @BaliUtd!
မိနစ် ၈၀ ကျော်မှာ အိမ်ရှင်ဘာလီအသင်း ပင်နယ်တီကန်သွင်းခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် နောက်တန်းကစားသမားတွေ ဂိုးဧရိယာထဲမှာ ဘောလုံးကို လက်နဲ့ ထိခဲ့တာကြောင့် ပင်နယ်တီ ကန်သွင်းခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး ဒီပင်နယ်တီကို ကီဗင် ဘရန့် ကန်သွင်းခဲ့ရာမှာ လွဲချော်သွားခဲ့တာကြောင့် ၃ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ ပွဲအပြီးမှာ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် အသင်း အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
84′ PENALTY to @BaliUtd! But unfortunately for the home side Kevin Brands completely flubs the shot as he sends it wide of the net.#AFCCup2018 #BLUvYGU pic.twitter.com/4ho5Rd5TqO
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ အုပ်စု G မှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဗီယက်နမ်ကလပ် FLC သန်ဟွာ အသင်းနဲ့ ရမှတ်တူ ဂိုးကွာခြားချက်အသာနဲ့ အမှတ်ပေးဇယားကို ဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်: ကျော်ဇင်ထက် ၊ ဒေးဗစ်ထန် ၊ ကီကီရီ မော်ကိုင်လူ ၊ ပြည့်ဖြိုးဇော် ၊ မင်းကျော်ခန့် (ကျော်ဇင်ဦး ၃၇’) ၊ ကိုဆုကိ အူချီဒါ ၊ ရန်အောင်ကျော် ၊ ကြည်လင်း (ဆောင်လမ်မောင် ၆၆’) ၊ အူဇိုချွတ်ကူ အီမန်နူရယ် ၊ မောင်မောင်လွင် (အီစိုး ၈၆’) ၊ ဆီကူ ဆယ်လာ
Home FOX Sports မြန်မာ ဘောလုံး အာရှဘောလုံးသတင်း ဘာလီအသင်းကို အနိုင်ရရှိပြီး အဖွင့်ပွဲစဉ်ကို အနိုင်နဲ့ စတင်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်